Ithegi: yabelana ngamaqhosha | Martech Zone
Maka: amaqhosha okwabelana
Izinto ezi-5 zomxholo wentsholongwane
NgoMgqibelo, Julayi 6, 2013 NgeCawa, ngoJulayi 7, 2013 Douglas Karr
Abantu abalungileyo kwi-Social Media Explorer bathumele i-infographic, i-5 Elements Element of Viral Content, ukusuka kwi-Intersection Consulting. Ngokwam, andilithandi igama lentsholongwane kule infographic… ndiyalithanda igama ekwabelwana ngalo. Amaxesha amaninzi ungagqitha kulindelo kwinto nganye ephambili ngaphakathi kolu lwazi-kodwa oko akuthethi ukuba iya kwintsholongwane. U-Leo Widrich ngaphezulu kweBlog yeBlog wabhala iposti enkulu malunga nokuba yintoni eyenza umxholo usasazeke. Kuyo,
Lwesine, Disemba 24, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Iinyanga ezintandathu zokugqibela bezinomceli mngeni njengoko ndiqale elam ishishini. Owona mceli mngeni kukuhamba kwemali… ukhawuleza ufumanise ukuba nangona usebenza nzima, imali ayithethi ukuba ingena emnyango. Ngenxa yoko, ndibaleka kwaye ndithetha kakubi. Andikayithengi indawo yeofisi okwangoku. Ndacinga ukuba ndingabelana ngokwaphuka kwezixhobo zam zorhwebo. Andinanto ikhethekileyo kwaye ndisebenza ngokwenene